Tuesday July 21, 2020 - 12:02:11 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Sarrifka Dollar-ka suuqa madaw ayaa kor u kacay qiyaastii 22%, waxuuna marayaa $1=50 ETB, qalalaasaha siyaasada kahor waxuu marayey $1 inta udhaxaysa 38 illaa 40 ETB, bankiyadii ayaa ayakuna todobaadkan joojiyey in lacag 500 Kun=$100 ka badan lagala
Sarrifka Dollar-ka suuqa madaw ayaa kor u kacay qiyaastii 22%, waxuuna marayaa $1=50 ETB, qalalaasaha siyaasada kahor waxuu marayey $1 inta udhaxaysa 38 illaa 40 ETB, bankiyadii ayaa ayakuna todobaadkan joojiyey in lacag 500 Kun=$100 ka badan lagala baxo maalintii, xataa haddii aad ganacsade tahay oo Malaayin akoonka kuugu jiraan.
Waxa la yaabka ah ayaa ah; inaadan xataa akoon kale uwarejin karin lacagta kuutaal akoonka, waxay ka dhigantay in la xidhay akoonkaga oo kale.
Ethiopia oo ah wadan aan waxbadan soo saarin lahayna dakad (land locked County) ayaa ilaha dhaqaalaha wadanku gaar ahan lacagta adagi ku xidhan tahay Bunka, Ubaxa iyo Jaadka oo ah waxa ay dibada udhoofiyaan, sidoo kale talxiisayaasha ayaa ayakana ay ka helaan lacagta adag. Waxaa istaagay ama aad hoos ugu dhacay dhoofinta Bunka, Ubaxa iyo Jaadka, halka dalxiisayaashu dunida oodhan Covid-19 dartii u istaageen inta aysan rabshaduhu bilaaban.
Bankiga Aduunka ayaa asaguna hakiyey lacag deyn ahayd oo ay ahayd in todobaadkii hore loo shubi dowlada Ethiopia, lama oga wakhtiga bankigu usoo fasixi doono.
Markaad isu gayso, colaadaha siyaasadeed iyo dhaqaalo xumida soo food saartey guud ahaan Ethiopia rajada Ethiopia maaha mid hididiilo kasoo muuqdan.
Haddii toban bari kahor ay Bankiga Ethiopia kuu taalay 1 million oo udhigantay qiyaastii 25 Kun oo dollar, maanta waxay udhigantaa 20 Kun oo dollar, waxaad khasaartey shan Kun oo dollar muddo 10 bari ah Adigoon akoonkaba kasoo saarin. Markaad ku dhufato balaayinta akoonada Ganacasatada iyo shacabka ku jirta waad qiyaasi kartaa khasaaraha ka dhashay iyo sicir-bararka ay keeni karto.
Dantu waxay kuugu jirtaa Markaad fursad hesho inaad kala baxdo ood dollar ama dahab u badalato.
Waxaa bartiisa Facebook ku qoray Cabdishakuur Ali